Articles | MyanmarJobsDB
Comments Off on Noble IT Solutions Co.,Ltd မှ သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အတွက် မရှိမဖြစ် Noble HRMS Software ၊ Time Attendance Machine နှင့် အခြားဆက်စပ် လုပ်ငန်းသုံး Software များ
Noble IT Solutions Co.,Ltd မှ သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အတွက် မရှိမဖြစ် Noble HRMS Software ၊ Time Attendance Machine နှင့် အခြားဆက်စပ် လုပ်ငန်းသုံး Software များ
Posted by Lin Naung | October 1, 2014 | Articles, Featured HR Product
မြန်မာပြည် အခြေစိုက် Noble IT Solutions Company သည် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံထုတ် ZK အမှတ်တံဆိပ် Finger Print နှင့် အခြား လုပ်ငန်းသုံး Software များကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။ MyanmarJobsDB website ကို အသုံးပြုနေသော users များအတွက် Noble IT Solutions ၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ…..
1) Human Resource Management System
၀န်ထမ်းများ၏ ရုံးတက်ရုံးဆင်း မှတ်တမ်းများ ၊ လစာပေးစနစ်များကို အထိရောက်ဆုံး ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သော စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ ၊ မိမိကုမ္ပ္ပဏီတွင် လုပ်ကိုင်ခံသော မှတ်တမ်းများ ၊ ရာထူးအလိုက် လစာနှုန်းသတ်မှတ်ထားခြင်းများကို ထည့်သွင်း သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ လစာတွက်ချက်ခြင်း အချိန်ပို လုပ်ခ တွက်ချက်ခြင်း ၊ ဆုကြေးငွေ/ အသုံးစရိတ် တွက်ချက်ခြင်း ၊ ခွင့်အမျိုးအစားများ ၊ အခွန်တွက်ချက်ခြင်း ၊ ၀န်ထမ်းများ၏ တာဝန်ချထားခြင်းများ တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Noble IT Solution CO.,Ltd မှ ရေးသားထားသော ၀န်ထမ်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို လက်ဗွေနှိပ်စက် အမျိုးမျိုးနှင့် တွဲဖက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
2) Point of sales System
Point of sales System တွင် Silver Package၊ Gold Package နှင့် Platinum Package ဟူ၍ သုံးမျိုးရှိပါသည်။ Silver Package တွင် Purchase ( credit / cash ) , Purchase Order , Sale (credit/ cash ) , Sales order , Inventory Management , Customer Management စနစ်တို့ပါဝင်ပါသည် ။
Gold Package တွင် Silver Package မှ Feature များ အပြင် cash book , General Ledger , Jouranl , Trial Balance , Profit & Loss, Balance Sheet များ ထပ်ပေါင်းပါဝင်သည်။
Platinum Package တွင် Gold Package မှ Feature များအပြင် ဆိုင်ခွဲရှိသော ဆိုင်များအတွက် online မှ တစ်ဆင့် ရုံးချုပ်သို့ အရောင်းအ၀ယ် ပေးပို့ နိုင်သော Feature ပါဝင်ပါသည်။
Domain Name Registration ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ Web Hosting၊ Email Hosting နှင့် Website Development / Maintenance များ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း
အထက်ပါ အချက်အလက် များနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက https://www.facebook.com/NobleITSoln တွင် ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
လိပ်စာ No. 116/118 (4A), Bokalay Zay Street (Middle Block), Botahtaung Township, Yangon
ဖုန်း – 09 320 300 78, 09 320 300 79, 01 398 332
Resume တွေမှာ ရေးလေ့ရှိတဲ့ ကောင်းတဲ့စာလုံးတွေ၊ မသုံးသင့်တဲ့စာလုံးတွေအကြောင်း စစ်တမ်းရလဒ်ပါအချက်တွေကို ဖတ်တဲ့အခါ တချို့က သဘောတူမှာ မဟုတ်ပေမယ့် အလုပ်လျှောက်မယ့် သူအတွက်တော့ resume ကောင်းကောင်းဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အတွက် အရင်တုန်းကထုံးစံအတိုင်း ရေးလာတဲ့ word document resume ပုံစံတွေ မရှိတော့ဘူးလို့ တော်တော်များများထင်နေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါတွေက ပျောက်ကွယ်မသွားသေးပါဘူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ LinkedIn profiles, video clips တွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်း အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ပိုပြီးလိုလားတဲ့ recruiter တွေလည်းရှိလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ resume အများစုကတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့သေချာစာစီထားတဲ့ word document တွေသာ တွင်ကျယ်နေပါသေးတယ်။
သို့ပေမဲ့လည်း resume တွေအကြာင်း ကောက်ယူထားတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် နောက်ဆုံး CareerBuilder စစ်တမ်းတစ်ခုကို လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် တွေ့ရတာကတော့ HR မန်နေဂျာအများစုက အလုပ်လျှောက်လွှာတွေကို အချိန်ပေးဖတ်ကြည့်ပြီး စဉ်းစားမနေ ကြတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် လျှောက်ထားတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ အဲဒီ အချိန်တို အတွင်းမှာ မိမိ Resume ကို သတိပြုခံရအောင် အခွင့်အရေးကို အမိအရဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်မှရပါမယ်။ တကယ်တော့ မန်နေဂျာတွေက resume တစ်စောင်ဖတ်ဖို့အချိန် ၂မိနစ် ထက်ပိုအချိန်မဖြုန်းကြတော့ပါဘူးတဲ့။
စစ်တမ်းအရတော့ HR မန်နေဂျာတွေထဲက ၁၇% လောက်က resume ဖတ်ရာမှာ စက္ကန့် ၃၀လောက်ပဲအချိန်ပေးဖတ်ကြတယ်။ အများစု ၆၈% လောက်ကသာ အချိန် ၂မိနစ်လောက်ပေးကြတယ်။
ဒီတော့ မေးခွန်းတွေ မေးစရာဖြစ်လာတယ်။ ရှင်းပြနေစရာမလိုလောက်အောင်ကို အရေးကြီးတဲ့ သေချာဖတ်ပြီးစစ်ဆေးရမဲ့တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ဘာလို့အချိန်နည်းနည်းပဲ ပေးရတာလဲ…?
ဒါကအလုပ်ရဲ့ သဘာဝပါပဲတဲ့၊ recruiter/HR manager တွေအနေနဲ့မြောက်များစွာသော resume တွေကို ကိုင်တွယ်နေရတဲ့ အချိန်မှာ position နဲ့ မကိုက်ညီဘဲလျှောက်ထားတဲ့သူတွေ အများကြီးပါနေလိမ့်မယ်။ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ကစားရသလိုပါပဲ။ Professional recruiter တွေအနေနဲ့ များစွာသော resume တွေရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ၀င်လာတာကလည်း သူတို့အတွက်ခေါင်းကိုက်စရာပါ။ တနည်းပြောရရင် resume တွေက အရမ်းများတဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ resume တွေမလွဲရင် အချိန်မပေးနိုင်ကြတော့ဘူး။
CareerBuilder ရဲ့ စစ်တမ်းကနေ ထောက်ပြလိုက်တဲ့အချက်တွေကတော့
အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ စိတ်ဝင်စားမှုအာရုံကိုအမိအရဖမ်းနိုင်ဖို့ resume ထဲမှာ အသုံးပြုတဲ့ စကားလုံးတွေက ပြောင်းလဲပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ survey အဖွဲ့က HRမန်နေဂျာတွေကို ထပ်မံမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။
၎င်းတို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ resume တွေထဲမှာ ဘယ်စာလုံးတွေက အများဆုံး ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုနေပြီး ဘယ်အသုံးအနှုန်းမျိုးက resume ကိုအချိန်ပေးဖတ်ဖို့အခွင့်ပိုစေခဲ့သလဲ?
အောက်ဖော်ပြပါအချက်တွေကတော့survey ကနေတစ်ဆင့်သိခဲ့ရတဲ့ resume တစ်ခုမှာတွေ့ရတဲ့ အကောင်းဆုံး နဲ့ အဆိုးဆုံး (မသုံးသင့်သော) အသုံးအနှန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုးဆုံးအသုံးအနှုန်းများ (ဤစကားလုံးများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားပါ)
Best of breed: 38 percent;
Think outside the box: 26 percent;
Synergy: 22 percent;
Go-to person: 22 percent;
Thought leadership: 16 percent;
Value add: 16 percent;
Results-driven: 16 percent;
Team player: 15 percent;
Bottom-line: 14 percent;
Hard worker: 13 percent;
Strategic thinker: 12 percent;
Dynamic: 12 percent;
Self-motivated: 12 percent;
Detail-oriented: 11 percent;
Proactively: 11 percent;
Track record: 10 percent.
အကောင်းဆုံးအသုံးအနှုန်းများ ( ဒီစာလုံးတွေကတော့ အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ resume မှာဖော်ပြစေချင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေပါ)
Achieved: 52 percent;
Improved: 48 percent;
Trained/Mentored: 47 percent;
Managed: 44 percent;
Created: 43 percent;
Resolved: 40 percent;
Volunteered: 35 percent;
Influenced: 29 percent;
Increased/Decreased: 28 percent;
Ideas: 27 percent;
Negotiated: 25 percent;
Launched: 24 percent;
Revenue/Profits: 23 percent;
Under budget: 16 percent;
ယေဘုယျအားဖြင့် အလုပ်ခန့်တဲ့ HR မန်နေဂျာတွေဟာ သင့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်း နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို အသေးစိတ် တိတိကျကျ ဖော်ပြနိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေကိုပိုပြီးလိုလားတယ်။ အချက်အလက်တွေကို တိတိကျကျမဖော်ပြနိုင်တဲ့အချက်တွေ အသုံးအနှုန်းတွေကတောအမှတ်လျော့စေမှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ်အလုပ်လုပ်တာတော်တယ်လို့ပြောနေယုံထက် ကိုယ်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ ရလာဒ်ကောင်းတွေကို ဘယ်လိုရယူပြီး ဘယ်လောက်ထိရယူနိုင်ခဲ့လဲဆိုတာ တိတိကျကျ ဖော်ပြပေးသင့်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်လေးများကို သတိပြုမိပြီး resume ကောင်းတစ်ခုကို ရေးသားနိုင်ကာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရယူနိုင်စေရန် MyanmarJobsDB မှ ယခုဆောင်းပါးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Reference from: TLNT
မိမိ Resume ကို ထူးခြားပေါ်လွင်အောင်ရေးသားနိုင်ဖို့အတွက် အကြံပေးချက်(၆)ချက်
Posted by Lin Naung | June 5, 2014 | Articles, Job Search
အခုလို အပြိုင်အဆိုင်နဲ့ အလုပ်ရှာဖွေရတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ မိမိရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်အကျဉ်း Resume ကို အများထက်သာအောင် ရေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုပါ။ သင့်ရဲ့ Resume သင့်ကို Interview ဖြေဖို့တံခါးဝ အထိပို့ဆောင်ပေးနိုင်သလို Reject Letter ငြင်းပယ်စာ ရေးဖို့ ဖယ်ထားတဲ့ စာရွက်အပုံထဲလည်း ရောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Resume ကိုဘယ်လိုထင်ရှားပေါ်လွင်အောင် ရေးရမယ်ဆိုတဲ့ အကြံပေးချက်တွေကိုကြည့်ရအောင်။
(1)Be brief with personal information
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို အသေးစိတ်ဖေါ်ပြရာမှာက နာမည်၊ ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ် နဲ့ email လိပ်စာ၊ လုပ်ငန်းရှင်ဘက်က သင့်ရဲ့ နေရပ်လိပ်စာအထိ ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်တော့အချိန်မအားလပ်ကြပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အိမ်ထောင်ရှိမရှိ နဲ့ အခြား အချက်အလက်များကိုလည်း အတိုချုံးရေးပေးပါ။
(2) Show off your skill set
မိမိအရည်အချင်းကိုအပြည့်အ၀ဖော်ပြနိုင်ပါစေ။ သင့်ကို အလုပ်ခန့်အပ်မယ့် အလုပ်ရှင်ဟာ သင့်ရဲ့အားသာချက်တွေနဲ့ ကုမ္ပဏီ အတွက် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ သင့်မှာရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေကိုသာ စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ ကိုယ်လျှောက်မယ့် အလုပ်နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်မယ့် သင့်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်အတွေ့အကြံ၊ နဲ့အရည်အချင်းတွေကို Resume ထဲမှာ အစီစဉ်တကျ နဲ့ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
(3) Relevant Employent History
သင့်ရဲ့ Resume ကိုဖတ်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ နောက်ထပ်စစ်ဆေးရမယ့် အခြား Resume တွေအများကြီးကျန်နေလိမ့်ဦးမယ်။ မိမိလျှောက်ထားတဲ့ ရာထူး နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကို ဦးစားပေးဖော်ပြပေးလျှင် ကိုယ်အတွက်အမှတ်ပိုရစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်တဲ့ မည်သည့် အတွေ့အကြုံမျိုးမဆို အစဉ်လိုက်ရေးထည့်ပေးပါ။
(4) Show your Personality
အလုပ်ရှင်က သင်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကို၊ သင်ကိုယ်တိုင်ပြောပြတာထက်ကို ပိုပြီးသိချင်ပြီး စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ဒီတော့ လက်တွေ့ပြလိုက်ပါ။ မိမိရဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုမှာ လုပ်အားပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ ရေးသားထားတဲ့ blog စာမျက်နှာတွေနဲ့၊ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ ပွဲအခမ်းအနားတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်ပါစေ။
CV မှာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဒီဇိုင်း၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာ နဲ့အခြားဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ ရုပ်ပုံတွေ ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းသည်လည်း မိမိ personality ကိုဖော်ပြခြင်းရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တယ်။
သင့်ရဲ့ CV ရေးသားရာမှာ အနုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေတယ်လို့ သဘောထားလိုက်ပါ။ မိမိတတ်ကျွမ်းထားတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို စားသားအနေနဲ့ ဖော်ပြခြင်းထက် ရုပ်ပုံများသုံးပြီး ကြိုးစားထည့်သွင်းဖော်ပြကြည့်ပါ။
အချိုးကျကျဒီဇိုင်းနဲ့ အချက်အလက်တွေကို တိတိကျကျ ဖွဲ့စည်းဖော်ပြထားမယ်ဆိုရင် သဘောကျ အမှတ်ရစေမှာ အမှန်ပါပဲ။အဓိက က ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာကို ဘယ်လိုဖော်ပြတယ်ဆိုတာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာပုံဖော်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ မိမိတတ်မြောက်ထားတဲ့ အရည်အချင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို Timeline တစ်ခုအနေနဲ့ရုပ်ပုံ၊စာသား ဒါ့အပြင် ဗီဒီယိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြပြီး စာဖတ်သူကိူဆွဲဆောင်ပါ။ ဒီအချက်တွေက CV ကိုပေါ်လွင်စေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ အကြေင်းအရာတစ်ခုနှင့်တစ်ခု အဆက်အစပ်ရှိပါစေ။
(6) Be passionate about the business
ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့အမြင်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကုမ္ပဏီအကြောင်းကို လေ့လာ ထားသည် သာမက လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကြိုးစား ဆောင်ရွက် လိုစိတ် သင့်မှာရှိသည်ကို ပြသပါ။
ထိုးထွင်းဥာဏ်စွမ်းရှိပါစေ။ ကုမ္ပဏီနဲ့ ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေပါ။ လက်ရှိအလုပ်ဝင် ၀န်ထမ်းများနဲ့မိတ်ဖွဲ့ ပါ။
လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင့်ရဲ့ ဗဟုသုတ ကို အဆက်အစပ်ရှိအောင် ဖော်ပြနိုင်ခြင်းက အလုပ်အပေါ် စိတ်အားထက်သန် မှုကို သိရှိစေပြီး interview မှာပါဝင်ဖို့ အခွင့်အရေး ရနိုင်ပါတယ်။ CV တွင် ကုမ္ပဏီအပေါ်မှာမည်မျှ အလေးအနက်ထားသည်ကို ပြသခြင်းအားဖြင့် ပြိုင်ဖက်ထက် နှာတစ်ဖျားသာနိုင် ပါတယ်။
CV ရေးသားရာတွင်အချိန်ပေးပါ။အကြံဥာဏ်တောင်းပါ။ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ ထင်မြင်ချက်တောင်းပါ။ First impression ကအရမ်းအရေး ကြီးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ CV က လုပ်ငန်းရှင်တွေအမြင်အတွက် first impression ပါ။ တကယ်ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။
Reference from Careerealism.com
By Khaing Mon Myat (yumi)
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ရင်း ကျောင်းတက်လိုသူများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူ
Zaw Education Center မှ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ကျောင်းတတ်ရင်းအလုပ်လုပ်ကိုင် လိုသူများအတွက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ တန်းခွဲအတွက် ကျောင်းလျှောက်လွှာများကို စတင်လက်ခံနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လျှောက်ထားလိုသူများသည် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည်ရမည်ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်တက်နေသူ (သို့) ဘွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ဂျပန်ဘာသာကို ရက် ၁၅၀ ကြာတတ်ရောက်ပြီးသူ သို့မဟုတ် N-5 အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၌ တရားဝင် Student Visa ဖြင့်သွားရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်တတ်နေစဉ် ကာလအတွင်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တိုက် ၂၄(အေ)၊ အခန်း-၆၀၂၊ မကြီးကြီးလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်သို့ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ Building Design Interior Design သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ Decoration ကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပြားသော Drafter, Interior Designer အဖြစ်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ Building Design, Interior Design သင်တန်းကို မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် Promotion ကွန်ပြူတာသင်တန်းကျောင်း၌ ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း ၃၈၉၀၃၈၊ ၀၉-၇၃၁၈၄၅၂၅ သို့ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ IELTS ရမှတ် ၆ မှတ်နှင့် အထက်ရရှိထားသော မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ ပြည်ပ ပညာသင် သွားရောက် ရန် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိသျှကောင်စီက ကြေညာသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုပြီးသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများနှင့် မိဘများအတွက် အထူးကျင်းပပေးသည့် ဟောပြောပွဲ
အလုပ်အကူးအပြောင်း မြန်လွန်းခြင်းကြောင့် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရေးရန် အကြပ်ရိုက်ခြင်း ကိုကောင်းစွာ ကိုင်တွယ်နည်း
Posted by MyanmarJobsDB | February 7, 2014 | Articles, Career Development, Job Search, Leadership and Management, Recruiting and Retention, Workplace
ယနေ့စီးပွားရေးလောကတွင် သင်၏လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံကို တင်ဆက်ရာတွင် စိတ်ဓာတ်မခိုင်မာဟု မထင်မြင်သွားစေရန် သေချာစွာဂရုစိုက်၍ တင်ပြသွားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏ အခြေအနေကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် စတင်ကာ၊ အခြေအနေဘယ်လောက် ဆိုးဝါးနေကြောင်း ကိုဆန်းစစ်ပါ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်က (၂) လ လောက် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေခဲ့ခြင်းကို စိတ်ပူနေမိပါက၊ ၄င်းသည် သင်၏ အလုပ်ရှာဖွေခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သင့်အနေဖြင့် လောလော လတ်လတ် အချိန်တွင် အလုပ်အကိုင်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ခြင်းသည် လပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှည်ကြာခဲ့ပါက သင့်အနေဖြင့် နည်းဗျူဟာများ သုံးရပါတော့မည်။
သင့် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို အမှိုက်တောင်းထဲ ရောက်စေမည့် အချက် (၄) ချက်
Posted by MyanmarJobsDB | January 31, 2014 | Articles, Career Development, Job Search
သင်သည် အလုပ်တစ်ခု လျှောက်ရန် အတွက် ပြီးပြည့်စုံသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ အလုပ်ခန့်အပ်မည့် မန်နေဂျာသည် သင်၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို တစ်ချက်သာ ကြည့်ပြီး အမှိုက်တောင်းထဲ ထည့်လိုက်ပါက သင့်အကြောင်းကို သူ ဘယ်တော့မှ သိတော့မည် မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် လုပ်လျှောက်နိုင်သည့် ခေတ်ရောက် နေသော်လည်း၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် ကောင်းတစ်ခုဟာ အောင်မြင်တဲ့ အလုပ်ရှာဖွေနိုင်မှုရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
သင်၏ CVကို လိမ်လည်ရေးသားမှုကြောင့် ခံရမည့် အကျိုးဆက်များ
Posted by MyanmarJobsDB | January 30, 2014 | Articles, Career Development, Job Search
By Kim Issacs, Monster Resume Expert
Mary ဟု ခေါ်သည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အထင်ကရကောလိပ်တစ်ခု၌ အဆင့်မြင့်သင်ကြားရေး ရာထူးအဆင့်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံလိုက်ရသောကြောင့် သူမသည် စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြီးစွာဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် (၂) နှစ်ကြာသောအခါ၊ ကောလိပ်၌ သူမ၏ ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ချက်များ၊ ထွန်းတောက်မည့် ကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ် နာမည်ကောင်းရနေခဲ့သော်လည်း၊ သူမသည် အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ ဘာအကြောင်းကြောင့်ပါလဲ။ သူမသည် အလုပ်လျှောက်စဉ်က ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို လိမ်လည်ရေးသားခဲ့သည်ကို သိသွားသော ကြောင့် ပင်ဖြစ်သည်။
Unilever Myanmar ၏ Management Trainee Program အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Posted by MyanmarJobsDB | January 30, 2014 | Articles
Unilever Myanmar သည် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသော ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း FMCG ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Unilever Myanmar Company တွင် On-Job-Training Program အတွက် လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူလျှက်ရှိပါသည်။
CV နမူနာပုံစံများကို ကိုးကားပါ ၊ ပုံတူမကူးပါနှင့်
Posted by MyanmarJobsDB | January 26, 2014 | Articles, Job Search
သင်၏ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်နှင့် အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်မည့် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပုံစံကို ရှာဖွေ၍ word-processing program ထဲသို့ ကူးယူပြီး အနည်းငယ် အပြောင်းအလဲလုပ်လိုက်ရုံဖြင့် ပြောင်မြောက်လှသော သင်၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် ရေးသားမှု ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ သင်ထင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် သင့်တော်သည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ထိုကဲ့သို့ နမူနာပုံစံကို ပုံတူကူး၍ ရေးသားခဲ့လျှင် သင်နှင့် တကယ်မသင့်တော်ပဲ အလုပ်ရှာနေမှုကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ မှန်ကန်စွာ ရေးသားပြုစုနိုင်မည်ဆိုပါက စာအုပ်များ၊ အွန်လိုင်းပေါ်ရှိ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နမူနာပုံစံများမှ အတွေးအခေါ် ပုံစံများကို အသုံးချခြင်းဖြင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရေးသားပုံကို တိုးတက်စေနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါတို့မှာ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် နမူနာများ ကို အတိအကျမကူးယူပဲ အသုံးချနည်းများ ဖြစ်ပါသည် –
ကိုယ်ရေးရာဇဝင် အကျဉ်းချုံးရေးသင့်သလား အကျယ်ချဲ့ရေးသင့်သလား
Posted by MyanmarJobsDB | January 24, 2014 | Articles, Job Search
`ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရေးသားရာတွင် ဘယ်လောက်ရှည်သင့်သလဲ၊ တိုသင့်သလဲ´ ဟူသော မေးခွန်းသည် အများဆုံးမေးလေ့ရှိသည့် မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော သိပ်မကြာသေးသည့်ကာလတွင် အလုပ်ရှာဖွေ နေသူများ က ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရေးသားရာတွင် စာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာထက်မပိုရန် ပြောဆိုခဲ့ကြပါ သည်။ ထိုစည်းမျဉ်းကို ချိုးဖောက်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များသည် ပစ်ပယ်ခြင်းခံရပြီး ရုံးတွင်း circular file သို့သာ ရောက်လိမ့်မည်ဟု ဆိုကြသည်။